Enkosi-ngokuBonwa kwakho namhlanje, Indy! | Martech Zone
NgoFebruwari ndatsala ubusuku bonke ngeempelaveki ngelixa ndandivolontiya i IKomiti yeSuperbowl ka-2012. UPat Coyle unditsalele umnxeba xa ibinyuka kwaye bendinamandla okuba ndikhwele ndize ndibonelele ngesikhokelo (kunye nentuthuko encinci) ukudibanisa kwezentlalo kunye nomkhankaso wokukhangela eya kufumana igama lase-Indianapolis kuyo yonke iwebhu njengesixeko esikhethiweyo.
Isiza sikwanomxholo oqulathiweyo ocociweyo kuyo yonke iwebhu nakwindawo zosasazo zasekuhlaleni ukugcina abahlali base-Indy benolwazi ngenkqubela phambili yeprojekthi. Yayiyiprojekthi enomvuzo omangalisayo kunye neqela elimnandi elalikhokelwa nguMark Miles. Wonke umntu wahlula kwaye woyisa… kwaye siyenzile! UMark yenye yeenkokeli-uyazi ukubeka iqela, asuse izithintelo kwimpumelelo, kwaye anike abantu amandla okwenza umsebenzi.
Namhlanje, ndifumene icwecwe elihle kuMichael Karnuta, uSekela Mongameli woPhuhliso lwezoShishino Iqumrhu lezemidlalo laseIndiana ngoncedo endilunikileyo. I-plaque inesiqwenga sokwenyani seRCA Dome kuyo, ipholile kakhulu!
Ukuba awuqhelananga neIndiana Sports Corporation kwaye uhlala apha ekuhlaleni, kufuneka njalo bazibandakanye umbutho kunye nokufumana kwakho inkampani yakho ukufumana ubulungu, kakhulu! Sinetoni yeziganeko eziza e-Indianapolis kule minyaka ilishumi izayo kwaye ukuba ufuna ukubuyisela kwingingqi kunye nokufumana ukwamkelwa okukhulu-eli liqela lokujoyina!
Iziko lezemidlalo laseIndiana
Iqela lobulungu laseIndiana Sports Corporation lisebenza njengesixhobo sokutsala iminyhadala ye-Indiana kunye nokubonelela ngamathuba awodwa kulutsha lwethu. Igalelo lakho lokutsalwa kwirhafu liza nenani lezibonelelo. Ukuba unemibuzo malunga nobulungu be-ISC, nceda unxibelelane noMike Pruzin kubulungu@indianasportscorp.com okanye (317) 237-5020.
Umbulelo okhethekileyo kuMichael ngokuthatha ixesha lokuphuma ukuza kundibona. UMike wayenobabalo olukhulu evakalisa umbulelo wakhe kum ngomzamo, ukwenziwa kunye nobunkokeli endiqhubeka ndibubeka ekukhuthazeni lo mmandla. Uphose ebhegini yeetshipsi zomthi wokosa ukubonakalisa ifuthe ebendinalo ukubasa umlilo phantsi kweprojekthi. Ndiyazingca ngokuthatha inxaxheba kwam ekufumaneni iSuperbowl (ngokuqinisekileyo… uPeyton noIrsay banokuba bancedile, nabo) kwaye ndinombulelo ngobuhlobo obuqhubekayo noPat Coyle ukuvula la mathuba.
Ndijonge ukulandela uMichael kunye nezinye iinkokheli zisebenza nzima ukuzisa iminyhadala yemidlalo kulo mmandla! Kuni bantu bangaphandle kwe-Indianapolis - andithethi kuthi masigubungele isixeko sethu, kodwa sisixeko esikhulu esinesiseko seshishini esidityaniswe kakuhle. Kuphi enye indawo onokuzivolontiya kwaye ungene kuyo ukunceda ukufumana iSuperbowl?!
tags: 2012 isitya esikhuluindianapolisphawula iimayilerca domeisitya esikhulu semidiya yoluntuisitya esikhulu
Ubudlelwane babathengi kubathengi kubomi bokwenyani
Jun 14, 2009 ngo-9:30 AM
Siyavuyisana nawe. Olu luntu lunethamsanqa ukuba nawe!